OLCreate: TIDE CC Myanmar မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူပိုင်ခွင့်နှင့် Openလိုင်စင်များ ရယူထားသည်
While OpenLearn has an upgrade on 20 ဇန်, OpenLearn Create will be in maintenance mode from 07:30
/ ► TIDE Master Trainer Programme
/ ► Creative Commons and Copyright
/ ► မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူပိုင်ခွင့်နှင့် Openလိုင်စင်များ ရယူထားသည်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူပိုင်ခွင့်နှင့် Openလိုင်စင်များ ရယူထားသည်
ဤသင်တန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော စာကြည့်တိုက်မှူးများ၊ အိုင်စီတီနှင့် အထောက်အကူပြုဝန်ထမ်းများအတွက် အဓိက ဖန်တီးရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကြား ပို့ချ သူ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများလည်း စိတ်ဝင်စားနိုင်ပါသည်။ ဤသင်တန်း တွင် စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင် အရေးပါရသော အကြောင်းအရင်း နှင့် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအသုံးပြုရန် ရှင်းလင်းစွာ ခွင့်ပြုထားသော လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်သည့် အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များက သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ကျောင်းသားများအတွက် အရေးပါပုံများကို မိတ်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးအပေါ် ယင်း၏ သက်ရောက်မှုများကို နားလည်မှု ပိုအားကောင်းလာခြင်း
Creative Commons ကိုနားလည်လာပြီး open license ရယူထားသော အကြောင်းအရာများသည် သင်၏တက္ကသိုလ်အတွက် အကျိုးရှိ နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းကို နားလည်လာခြင်း
open license ရယူထားသောရင်းမြစ်များအား အသုံးပြုပုံကို ပိုမိုနားလည်လာခြင်း
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလေ့အထနှင့် open license ရယူထားသောရင်းမြစ်များအား အသုံးပြုမည့် အခြားသူများကို ကူည ပံ့ပိုးပုံအား ပြန်လည်သုံးသပ်လာနိုင်ခြင်း
The Transformation by Innovation in Distance Education (TIDE) project enriched distance learning in Myanmar by building the capacity of Higher Education staff and students, enhancing programmes of study, and strengthening systems that support Higher Educational Institutions (HEI) in Myanmar. TIDE was part of the UK-Aid-funded Strategic Partnerships for Higher Education Innovation and Reform (SPHEIR) programme(www.spheir.org.uk). SPHEIR is managed on behalf of FCDO byaconsortium led by the British Council that includes PwC and Universities UK International. The TIDE project closed in May 2021.
This course is part ofacollection of courses called Creative Commons and Copyright. There are2courses in this collection so you may find other courses here that maybe of interest to you.
ဤသင်တန်းတွင် ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွ ာနားလည်လာပြီး လွပ်လပ်သောလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များနှင့် သင်၏တက္ကသိုလ်အတွက် မည်သို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ကို ပိုမိုသိရှိလာမည် ဖြစ်သည်။
သင်တန်း၏ လေ့လာမှုရလဒ်များကို အပြည့်အစုံ ကြည့်လိုပါက သင်တန်းဖော်ပြချက်တွင် ကြည့်ပါ။
First Published 09/07/2021.
ကြိုဆိုပါတယ် Website content
အခန်း ၁ ။ စာပေနှင့်အနုပညာ မူပိုင်ခွင့်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ Website content
အခန်း ၁ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ iCMA or quiz
အခန်း ၁ ။ နောက်ဆက်တွဲ အရင်းအမြစ်များ Website content
အခန်း ၂ ။ အများပြည်သူပိုင်နေရာ (Public domain) နှင့် Creative Commons လိုင်စင်များအားမိတ်ဆက်ခြင်း Website content
အခန်း ၂ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ iCMA or quiz
အခန်း ၂ ။ နောက်ဆက်တွဲ အရင်းအမြစ်များ Website content
အခန်း ၃ CC လိုင်စင်အား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Website content
အခန်း ၃ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ iCMA or quiz
အခန်း ၃ နောက်ဆက်တွဲ အရင်းအမြစ်များ Website content
အခန်း ၄ ။ OER နှင့် CC လိုင်စင်ရှိ သောလက်ရာများကိုအသုံးပြုခြင်း Website content
အခန်း ၄ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ iCMA or quiz
အခန်း ၄ ။ နောက်ဆက်တွဲ အရင်းအမြစ်များ Website content
အခန်း ၅ ။ CC လိုင်စင်သုံးသောလက်ရာကိုဖန်တီးခြင်း Website content
အခန်း ၅ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ iCMA or quiz
အခန်း ၅ ။ နောက်ဆက်တွဲ အရင်းအမြစ်များ Website content
အခန်း ၆ ။ သင်နှင့်သင်၏တက္ကသိုလ် Website content
အခန်း ၆ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ iCMA or quiz
စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်အချက်အလက်များ Website content
ကျေးဇူးတင်လွှာ Website content
This course is made available under CC BY 4.0: Transformation by Innovation in Distance Education (TIDE)